डब्ल्यूएचओको टिम चीनको वुहान सहरमा
By administrator on	 January 14, 2021 अन्तर्राष्ट्रिय खबर
Members ofaWHO team arrives in Wuhan in central China’s Hubei province on Thursday, Jan. 14, 2021. The global team of researchers arrived Thursday in the Chinese city where the coronavirus pandemic was first detected to conductapolitically sensitive investigation into its origins amid uncertainty about whether Beijing might try to prevent embarrassing discoveries. Photo: AP
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) को टिम चीनको वुहान सहर पुगेको छ । यो टिम कोभिड–१९ को सुरुवात कसरी भयो, यसबारेमा जाँच गर्न वुहान पुगेको हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र चीनबीच लामो समयसम्म चलेको छलफलपछि कोरोना भाइरसको जाँच, अनुसन्धानका लागि सहमति बनेको हो ।
१० वैज्ञानिकको यो टिमले अनुसन्धान संस्था, अस्पताल र सी–फुड बजारमा रहेका व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिनेछ । सन् २०१९ को अन्त्यतिर वुहानमा पहिलो पटक कोभिड–१९ को सङ्क्रमण भेटिएको थियो । आज यो टिम वुहान पुग्दा त्यहाँको जनजीवन लगभग सामान्य भएको पायो, तर उत्तरी चीनमा कोरोनाको नयाँ सङ्क्रमण देखिन थालेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको टिमले जाँच सुरु गर्नुअघि पहिलो दुई हप्तासम्म क्वारेण्टाइनमा रहनेछ । यो टिमले जाँचको क्रममा चिनियाँ अधिकारीहरूले दिएको नमुना र प्रमाणको प्रयोग गर्नेछ । यो टिमले कुन जनावरबाट कोरोना सुरु भएको हो, यसको जाँच पनि गर्नेछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा विश्वव्यापी सङ्क्रमण र प्रतिक्रिया इकाइका प्रमुख प्रोफेसर डेल फिशरले बीबीसीसँग भन्नुभयो, ‘विश्वले यसलाई एक वैज्ञानिक यात्राको रुपमा लिने विश्वास छ ।’ ०००००